Team Members – Nepal World Peace Movement
Home > Our Membership
यस विधानको दफा ७ बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि नेपाली नागरिकले तोकिएको प्रकृया अन्र्तगत रही आवेदन गरेमा संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु साधारण सदस्य हुनेछन् ।
यस संस्था दर्ता हुदाँको बखतका पदाधिकारीहरु संस्थापक सदस्य हुनेछन् । संस्थापक सदस्यहरुले साधारण वा आजीवन सदस्यता लिएर विधान बमोजिम शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
संस्थाको विकासको लागि विशेष सहयोग तथा योगदान पुयाउने व्यक्तिहरुलाई तोकिएको पव्र्रिया अन्तर्गत आजीवन सदस्यता प्रदान गरिने छ ।
संस्थाले उपयुक्त ठहर गरेको विशिष्ट समाजसेवी तथा प्रतिष्ठित नेपाली नागरिकलाई संस्थाको मानार्थ सदस्य प्रदान गर्न सकिनेछ तर मानार्थ सदस्यहरुको मताधिकार रहने छैन ।
सदस्यता प्राप्तिको लागि आवश्यक योग्यता
यस संस्थाको सदस्यताको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ ।
नेपाली नागरिक हुनुपर्ने ।
१८ बर्ष उमेर पुरा गरेको ।
मानसिक सन्तुलन नगुमाएको ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको नठहरेको ।]
नैतिक पतन देखिने फौज्दारी र भ्रष्ट्राचारीको अभियोगमा सजायँ नपाएको ।
संस्थाको सदस्य प्राप्त गर्न वा वहाल रहन नसक्ने अवस्था
देहायका अवस्थामा कुनै व्यक्ति संस्थाको सदस्यताको सदस्य पद प्राप्त गर्न सक्ने छैन ।
गैर नेपाली नागरिक ।
१८ वर्ष उमेर पुरा नगरेको ।
मगज विग्रेको वा वौलाएको ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको ठहरेको।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी र भ्रष्ट्राचारी अभियोगमा सजायँ पाएको ।
सम्वन्धित संस्थाको व्यवसायमा नीजि स्वार्थ भएको ।
साहुको दामासाहीमा परेको ।
कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी गरेको । आफ्नो धनमाल अनिाधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अदालतवाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको ।
१. देहाएको अवस्थामा कुनै पनि संस्थाको सदस्यमा बहाल रहने छैन् ।
यस विधानको दफा ८ बमोजिम सदस्य पद प्राप्त गर्न नसक्ने भएमा ।
साधारण सभाबाट ७५% को सदस्यहरुको बहुमतले संस्थाको सदस्य पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा ।
सदस्यले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा ।
संस्थाको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट प्रमाणित भएमा ।
यस विधान बमोजिम संस्थाले गर्न नहुने, भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेमा ।
सदस्यता शुल्क बुझाउन बाँकी भएमा ।
संस्था विघटन भै खारेज भएमा ।
२. कुनै व्यक्ति संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्न वा वहाल रहन अयोग्य ठहराउनु भन्दा अघि संस्थाले निजलाई सो कुराको सूचना दिई, सफाईको सबुद पेश गर्ने मौका दिइने छ ।
सदस्यता शुल्क र सदस्यता प्रदान गर्ने विधि
यस विधानको दफा ६ बमोजिमको उपदफामा तोकिएको शुल्क तिरी, सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
(१) साधारण सदस्य :-
साधारण सदस्य प्राप्त गर्न चाहने प्रवेश शुल्क वापत रु १००।– र वार्षिक शुल्क वापत रु १२००।–बुझाई तोकिएको प्रव्रिmया अनुसार आवेदन पेश गर्नेलाई कार्य समितिको निर्णयले साधारण सदस्यता प्रदान गर्न सकिने छ ।
त्यस्ता साधारण सदस्यले वार्षिक नविकरण शूल्क रु २५०।– बुझाउनु पर्नेछ ।
साधारण सदस्य प्राप्त गर्ने सदस्यले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको मसान्त भित्र नविकरण गराइ सक्नु पर्नेछ र त्यसपछिको हकमा तोकिए बमोजिमको थप दस्तुर बुझाई नवीकरण गर्न सक्ने छ ।
(२) संस्थापक सदस्य :-
संस्था दर्ता हुदाँको बखतका तदर्थ समितिको पदाधिकारीहरु संस्थापक सदस्य हुनेछन् ।
संस्थापक सदस्यहरुले विधानमा उल्लेख भए बमोजिमको शुल्क बुझाई साधारण सदस्य वा आजीवन सदस्य प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
(३) आजीवन सदस्य :-
संस्थामा एकमुष्ट रु ५०००।– बुझाई तोकिएको प्रव्रिmया अन्र्तगत आवेदन दिने व्यक्तिहरुलाई कार्य समितिको निर्णयले आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । आजीवन सदस्यहरुले नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन । आजीवन सदस्य बन्नको लागि कम्तिमा ५ वर्ष यस संस्थामा सक्रिय रुपमा कार्य गरेको हुनुपर्नेछ ।
(४) मानार्थ सदस्य :-
साधारण सभाको निर्णयले उपर्युक्त ठानेकोे समाजको हित र समुन्नति हुने कार्यमा यथेष्ट रुची देखाई सरसहयोग गरेको विशिष्ठ समाजसेवी तथा प्रतिष्ठित नेपाली नागरिकलाई संस्थाको मानार्थ सदस्य प्रदान गर्न सकिनेछ तर मानार्थ सदस्यहरुको मताधिकार रहेन छैन ।
(५) कुनै आवेदकलाई सदस्य नदिने निर्णय गरेमा सोको कारण सहितको जानकारी आवेदकलाई दिइनेछ ।
(६) सबै सदस्यहरुले यस विधान र विधान अन्तर्गत बनेको नियम र विनियम बमोजिम भएको व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने छ ।
(७) संस्थाले प्रदान गरेको उपदफा १, २, ३ र ४ अनुसारको सदस्यहरुका तोकिएको ढा“चामा छुट्टै अभिलेख पुस्तिकामा रहनेछ